XOG: DFS oo ku dhacday Dabin ay dhigeen Midowga Afrika & Masar, Kenyana dan ugu jirto. -News and information about Somalia
Home Warkii XOG: DFS oo ku dhacday Dabin ay dhigeen Midowga Afrika & Masar,...
XOG: DFS oo ku dhacday Dabin ay dhigeen Midowga Afrika & Masar, Kenyana dan ugu jirto.
Maalin kahor ayay ahayd markii wasiirka Arrimaha dibada Soomaaliya Axmed Ciise Cawad beeniyey in uu jiro kulan laga dhex wado in ay kulmaan Madaxda Soomaaliya & Kenya, balse ugu dambeyn warbaahinta ayaa baahisay muuqaalada iyo warka cadeynaya in ay kulmaan Madaxweynayaasha Soomaaliya, Kenya & Masar oo ay ka wada hadleen arrimaha Badda ee u dhaxeeya labada dal.
Madaxweynaha Masar Cabdifitaax Al Sisii oo ahaa dhexdhexaadiyaha labada dhinac ayaa isku geeyey, waxaana lagu sheegay war ka soo baxay Madaxtooyada Soomaaliya in laga wada hadlay arrimaha u dhaxeeya labada dal.
Is afgarad siyaasaded ayay sheegen in ay gaaren oo ay ku jirto in la dhiso guddi labada dhinac ka socda oo iska kaashada sii wadida wada hadalada labada dhinac, in arrimaha badda lasoo qaaday iyo In xariirka labada dal dib loogu celinayo halkii uu ahaa bishii Febaraayo ee sannadkan.
Sidda ay tabisay Soomaaliya, shirkan waxaa abaabulay Gudoomiyaha midowga Afrika, waxaana sidaas oo kale qeyb ka ahaa Ergay cusub oo ay Midowga Afrika u magacaabeen arrimaha labada dal ee Soomaaliya & Kenya.
Kenya, waxay dadaal badan galisay sidii ay arrimahan oo dhan u dhici lahaayeen, waxaana ay ku guuleysatay qabsoomida shirkan oo ahaa mid dhankeeda muhiim weyn ugu fadhiya, waxaana Uhuru u arkaa talaabo wanaagsan oo u qaaday shacabkiisa.
Si weyn ayaa isha loogu hayey dhacdooyinka magaalada New York, waxaana muuqda shaki weyn oo ah in ay dawladda Soomaaliya aqbashay wada hadal in laga galo kiiskan, gaar ahaana magacaabida guddiga isku dhafka labada dhinac waxyaabaha uu qaban doono, Iskaashiga labada dal ee la xoojinayo, iyadoo la og yahay in Soomaaliya & Kenya ay isku qabteen arrimaha Badda oo kaliya.
Previous articleJuventus Oo Guul Soo Laabasho Leh Ka Gaadhay Brescia Xilli Uu Cristiano Ronaldo Ka Maqnaa
Next articleFaah faahin: Qarax Xooggan oo sababay dhimasho & dhaawac oo ka dhacay Muqdisho
Dowladda Somalia Oo Ka Hadashay Dagaal Dhexmaray Dad Shacab Ah Iyo...